India: Rahul Gandhi: Congress yakaparadza pfungwa yaNarendra Modi | India News - TELES RELAY
HOME » pasi rose India: Rahul Gandhi: Congress yakaparadza pfungwa yaNarendra Modi | India News
NEW DELHI: Gurukota rezvematongerwo enyika Rahul Gandhi vati Chishanu kuti bato ravo rakakwanisa kubvisa pfungwa iyi Narendra Modi mumakore mashanu apfuura.
Mutungamiri weCongress anosekawo Prime Minister nekuchengeta hurukuro yake yekutanga mushure memamwe mashomanana kusati kwapera kupera.
Amit Shah, mutungamiri weBJP, uye Modi vakagadzira musangano wezvepanhau pahofisi yepamusoro panguva imwe chete iyo Rahul akataurira vatapi venhau kuCommunity headquarters.
Gare gare, paTweet, mukuru weCongress akashora Prime Minister nekuda kwekusabvunza mibvunzo panguva yehurukuro. "Congratulations Modi Ji. Excellent press conference! Hafu yehondo yacho ichazadziswa. Nguva inotevera, Mr. Shah angatokubvumira kupindura mibvunzo mishoma. Bravo! "Akaudza tweet.
Congratulations Modi Ji. Excellent press conference! Kuti uzviratidze iwe hafu yehondo. Nguva inotevera Mr. Shah aigona ... https://t.co/cgZPX5ewnw
"Sei Prime Minister isingagamuchiri kuchema kwangu kuti ndiitewo nharo pamusoro peRafale nyaya," Rahul akabvunza.
Achipindura mubvunzo, akasimbisa kuti uzivi hwaH Shah naMurm hahuna kuve huzivi hweMahatma Gandhi.
Rahul akataurawo kuti basa reChisarudzo yeKisarudzo mukati mekutsvaga uku kwaive "yakasarura" uye kuti yakapa mirairo ichiri mupfungwa mupurogiramu ye Modi.
Mutungamiri weCongress anogamuchirawo kupikisa kwekambani yake uye anotaura kuti yakaita basa rinokosha mukuchengetedzwa kwemasangano kunopikisa Prime Minister Modi uye BJP. "Basa reC Cong semusangano wekupikisa raiva chikoro A," akadaro.
Vakuru vezvematongerwo enyika vaipomerawo sarudzo yekusarudzira, vachiti mutumbi waita sarudzo "yakaropafadzwa" sarudzo yeBJP.
"Basa reKomisheni yeSarudzo mumasarudzo aya rave rakasarura uye rakapa mirairo ichichengeta mupfungwa yehurongwa hwe PM PM," akadaro.
VaRahul vakati chisarudzo pamutungamiri wehurumende yehurumende isiri yeBJP kuCentral inotorwa mushure mekubudiswa kwemigumisiro yeLok Sabha sarudzo ye23.
"Vanhu vachapa mvumo yavo muna May 23. Handingatauri pane izvi kusvikira chisarudzo chaitwa. Handidi kutonga kutonga kwevaIndia. Tichaita sarudzo kubva pane izvo vanhu vachazoita, "akadaro Gandhi.
Muvhidhiyo: Congress yakaparadza pfungwa yaNarendra Modi: Rahul Gandhi
Ita pfungwa dzechisarudzo Lok Sabha uye zvinoguma nei 23 inogona kuita nemi. Titevere isu kuti titevere nhau dzekupedzisira, mararamiro ehupenyu, nhepfenyuro yekuongorora uye yakadzama data analysis. Tevera mararamiro zvikwata zvechisarudzo iyo yakakura miitiro uye zvinyorwa zvinokurumidza zvakanyanya pazuva rekuverenga nehukuru hukuru hwehutano hweIndia.